Soomaali (Somali) - Via to Transit - King County Metro Transit - King County
Soo qaado abb-ka, safar diyaarso
Adeegga Via to Transit waa gaadiid dadweyne oo adiga kuu yimaadda. Safarrada toos uga diyaarso telefoonkaaga waxaanad u safraysaa kana soo safraysaa meelaha muhiimka ah ee ku kala baahsan Othello, Rainier Beach/Skyway, Renton iyo Tukwila.
Soo dejiso abb-ka Via
Waa maxay adeegga Via to Transit?
Saacadaha & maababka
Sida loogu safro
Via to Transit waa adeeg tijaabo ah, oo la dalbado oo rakaabka ku xira oo u qaada kana soo qaada xarumaha dhexe ee gaadiidka iyo bulshada ee afar degaan ama aag oo loogu adeego. Qof kastoo jooga aagagga ama degaannada loogu adeego ayaa soo dejisan kara abb-ka ama barnaamijka telefoonka gacanta ee Via ama wici kara si uu safar u codsado.
Ku xiridda Xarumaha dhexe
Isniinta - Sabtida:
5 subaxnimo ilaa 1 subaxnimo
6 subaxnimo ilaa 12 subaxnimo
Saldhigga Othello ee tareenka fudud ee Link
Saldhigga Rainier Beach ee tareenka fudud ee Link
Xarunta Gaadiidka Renton
Isniinta - Axadda::
8 subaxnimo ilaa 6 fiidnimo
Xarunta Caafimaadka Kaiser Permanente Renton
Maktabadda Renton Highlands
Saldhigga Tukwila International ee tareenka fudud ee Link
Xarunta Bulshada Magaalada Tukwila
Maabka Degaanka Adeegga:
Safar diyaarso adigoo ka dalbanaya abb-ka Via
Safar diyaarso adigoo ka dalbanaya abb-ka Via ama wacaya lambarka 206-258-7739. Filo in lagu qaado 15-20 daqiiqo gudahood ka dib marka aad safarka codsato; waxaad u baahan kartaa in aad xoogaa u lugayso goobta lagaa qaadayo.
Marka aad fuusho lacagta ku bixi kaarkaaga ORCA ama ku bixi Tigidhka Transit GO ama adigoo kaarka deynka/jarista bangiga ku isticmaalaya abb-ka Via/xarunta wicista. Safarrada waxaa lala wadaagi karaa macaamiisha kale ee Metro.
Gaar halka aad tagayso: Adeegga Via to Transit waxuu diyaar u yahay oo keliya safarrada ku jira degaanada qeexan ee loogu adeego. Waa in uu safarkaagu hal dhinac kaga dhammaado xarun dhexe oo loogu talagalay degaanka loogu adeego. Waxaa la heli karaa baabuur gaari curyaan lagu galo.
Macaamiisha waxaa weliba u furan in ay adeegga Via to Transit ku isticmaalaan degaanada loogu adeego iyagoo wacaya lambarka 206-258-7739 si ay safar u diyaarsadaan. Shaqaalaha telefoonka ayaa kaa caawin kara in aad safar diyaarsato, codsato baabuur gaari curyaan lagu galo, ama kaaga jawaabi kara su’aalaha. Isla sida abb-ka, macaamiisha lambarka waca waxay tilmaami karaan sida ay rabaan in ay u bixiyaan lacagta safarkooda – iyagoo ama ku bixinaya kaarka ORCA, Tigidhka Transit GO, ama kaarka deynka jarista bangiga.
Waa maxay qiimaha safarku?
Qiimaha adeegga Via to Transit waxuu la mid yahay safarka baska Metro. Waxaa la bixiyaa noolalka caadi u ah Metro.
Dadka waaweyn (19 iyo ka weyn) $2.75
Dhalinyarada (6-18 sano) $1.50
Dadka haysta kaarka ORCA LIFT
(dakhliga u qalma)$1.50
Dadka haysta kaarka RRFP
(waayeelka diiwaangashan, Medicare, naafada ah) $1.00
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeegga Via to Transit ayaa dhawaan imanaya.